Indlela yenkampani evulelekileyo yengqesho kunye nokuvuleleka kunye nentlonipho yeetalente kutsale inani lamazwe aphesheya kweelwandle,
Iitalente eziphezulu ezivela kwiinkampani ze-Fortune 500 kunye neenkampani ezibalaseleyo zasekhaya.
Uphuhliso oluqhubekayo nolukhawulezayo lwenkampani yenze imfuno eqhubekayo yeetalente
Nali iqonga eligqwesileyo apho amakhondo namaphupha anokuphunyezwa khona!
● Umvuzo kunye neZibonelelo:
Ngomvuzo okhuphisanayo kushishino kunye nommandla, iitalente ezibalaseleyo azifumani nje imvakalelo yokufezekiswa kwimisebenzi yazo, kodwa kunye nembuyekezo efanelekileyo kwiinzuzo.Inkampani ngoku ibonelela ngeentlobo ezintlanu ze-inshurensi kubasebenzi: i-inshurensi yokulimala emsebenzini, i-inshurensi yokubeleka, i-inshurensi yokungaphangeli, i-inshurensi ye-inshurensi kunye ne-inshurensi yonyango.
Inkampani ikhuthaza indawo ekhuphisanayo "elungileyo, enobulungisa nevulekileyo", kwaye izama ukwenza wonke umqeshwa waseGuansheng abe nendawo yophuhliso oluzinzileyo;
Inkqubo yovavanyo lwenkuthazo esebenzayo ifezekisa injongo yokusebenza ngezandla, ukulandela ukugqwesa, nokwabelana ngeziphumo ngokuncoma, ukuwonga nokubonelela ngamathuba ophuhliso lwekhondo lexesha elide kubasebenzi ngomsebenzi obalaseleyo.
Inkampani ngokuqhubekayo yazisa kwaye iqeqesha iitalente, ibonelela ngesithuba esibanzi sophuhliso lwekhondo leshishini, izakhono kunye nolawulo, inoqeqesho lwangaphakathi olucwangcisiweyo nolupheleleyo kunye neenkqubo zoqeqesho lwangaphandle, ibonelela ngamathuba kunye nokusingqongileyo kuphuhliso kunye nokukhula komsebenzi ngamnye, ngaloo ndlela kuseka inkqubo esebenzayo. , Abasebenzi abanamandla kunye nozinzile.